कुनैबेला माओवादीका प्लाटुन कमाण्डर कांग्रेसबाट भोटेकोसी हाँक्दै, यस्ता छन् उनका योजनाहरू (अन्तर्वार्ता) - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ विचार/अन्तरवार्ता ∕ कुनैबेला माओवादीका प्लाटुन कमाण्डर कांग्रेसबाट भोटेकोसी हाँक्दै, यस्ता छन् उनका योजनाहरू (अन्तर्वार्ता)
कुनैबेला माओवादीका प्लाटुन कमाण्डर कांग्रेसबाट भोटेकोसी हाँक्दै, यस्ता छन् उनका योजनाहरू (अन्तर्वार्ता)
सिन्धु खबर आईतबार, २०७९ जेठ १५ / ११:५२
भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नोर्बु शेर्पा भर्खरै अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन । ५७ सालतिर माओवादी द्वन्द्वमा लागेका शेर्पा अहिले कांग्रेसबाट भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । जनमुक्ति सेनाको प्लाटुन कमाण्डर भएका उनले द्वन्द्वकालमा आफ्नो घर पनि गुमाएका थिए । आठ जना माओवादी नेताहरूलाई उनको घरबाट सेनाले पक्राउ गरेपछि उनको घर पनि सेनाले ध्वस्त बनाएको थियो ।
भोटेकोसी ६ तत्कालीन मामिर्ङ गाविसमा जन्मेका शेर्पाले माओवादी जनयुद्धमा लाग्दा आफ्ना र जनताका लागि धेरै सपना देखेका थिए । गरीब परिवारका उनलाई खान लाउन र परिवार पाल्नसमेत धौ धौ थियो । जनयुद्ध सफल भएसँगै सबै दुख कष्ट सकिने सपना देखेका उनी जब छाँगाबाट खसेजस्तै भए कि २०६४ सालमा माओवादीले एकल बहुमत ल्याउँदा पनि उनको घर बनेन । उनका सपनाहर पूरा भएनन् । जनतासँग गरेका वाचा अधुरै रहे । त्यसपछि उनी निराश भए । लामो समय बन्दुक बोकेर हिडेका र धेरै युद्ध गरेका शेर्पाका शरीरमा अहिले पनि गोली लागेका घाउहरु छन् ।
तर उनका सपनाहरुपनि गोली लागेका घाउ जस्तै अधुरै अपुरै रहे । घर बनाउन दौडधुप गर्दागर्दै उनी थाके । अनि उनी यो पार्टीले जनताको सेवा नगर्ने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यसपछि २०६५ सालबाट उनी कांग्रेसमा प्रवेश गरे । अहिले उनी कांग्रेसका महासमिति सदस्य छन् । २०७० मा उनले गाउँ इकाइ समितिको सभापति भएर पनि कांग्रेसको संगठन चलाए । कुनै बेला उनी तरुण विभाग केन्द्रीय सदस्य पनि थिए । उनै शेर्पासँग सिन्धुखबरले गरेको कुराकानी ।
कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
गाउँपालिकालाई व्यवस्थित गर्न अलिकति समय लाग्छ । भर्खरै निर्वाचित भएर आएको छु । यसमा चुनौती पनि छ अवसर पनि छ । तर म चुनोतीलाई अवसरमा बदलेर सुन्दर भोटेकासी निर्माणमा लाग्नेछु ।
पहिलो निर्णय के गर्नुभयो ?
पदवहाली हुनासाथ हामीले पहिलो निर्णय सरकारको नीति नियममा पनि छ । माध्यमिक शिक्षासम्म (१२ कक्षा) सम्म निशुल्क शिक्षा दिने । अहिले पनि हाम्रे गाउँपालिकामा यो कार्यान्वयनमा छैन् । पालिकाले पनि बजेट छुट्याउन नसकेको र केन्द्रकाट पनि कम बजेट विनियोजन भएका कारण त्यो कार्यानवयन हुन नसकेको हो । भोटेकोसी गाउँपालिकाका ५ वटा वडामध्ये एउटा वडाका १० जना आर्थिक अवस्था कमजोर, पिछडिएका र जेहेन्दार विद्यार्थीलई निशुल्क शिक्षा दिने निर्णग गरेका छौँ । त्यस्तै पञ्जीकरण (जन्म,मृत्यु र विवाह) निशुल्क गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।
अबको एक महिना तपाइको प्राथमिकता के छ ?
प्राविधिक हिसाबले भोटेकोसी क्षतविक्षत भएको छ । प्रत्येक वर्ष निकै क्षति हुने गरेको छ त्यसैले पहिलो महिना विपत व्यवस्थापन गर्ने कुरामै मेरो ध्यान जानेछ किनकी वर्खा सुरु भइसकेको छ । हाम्रो गाउँपालिकाको धेरै बसोबा गाउँमा नै हुने गरेको छ । कुनै पनि ठाउँमा पक्की बाटो पुगेको छैन् । जसका कारण वर्षा सुरु हुनासाथ जेठ महिनादेखि यातायात बन्द हुने अवस्था छ । त्यसलाई निरन्तर गर्ने कसरी त्यसबारे छलफल गरिरहेको छु ।
विपद व्यवस्थापनको लागि के तयारी छ ?
केन्द्र र जिल्ला तहका विपद व्यवस्थापन र मौसम विज्ञ टोलीका सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल भएको छ । मौसम मापन कसरी गर्ने, अहिलेसम्म कसरी भएको छ र आगामी दिनमा कसरी जाने भनेर छलफल भएको छ । केन्द्रीय तहमा पनि सिन्धुपाल्चोकका हेलम्बु बाह्रबिसे र भोटेकोसी बढी बाढी पहिरोको जोखिमका ठाउँ रहेका छन् । त्यसैले विपद न्यूनीकरण गर्न चाहिने आवश्यक उपकरण तत्काल खरिद गरेर राख्नेछौँ । ती सामग्री वडा तहसम्म वितरण गरेर विपद आइहाले पनि स्थानीय स्तरबाटै व्यवस्थित गर्ने काम हुनेछ ।
विपदबारे थाहा पाउने साइरनहरू जडान गर्नुभएको छ ?
अहिलेसम्म छैन । अब हामीले ठूलो बाढी आउन सक्ने पूर्व जानकारी दिने उपकरणहरु राख्ने तयारीमा छौँ ।
स्थानीयलाई आर्थिक पाटोसँग कसरी जोड्नुहुन्छ ? स्थानीयलाई गाउँ छाड्न नदिन के गर्नुहुन्छ ?
भोटेकोसी पर्यटकीय क्षेत्रमा धेरै सम्भावना भएको ठाउँ हो । यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ । यहाँ भैरवकुण्ड, लिस्तीमाई ,तातोपानी धारा, दुगुनागढीलगायत चर्चित पर्यटकीय ठाउँ छन् । त्यस ठाउँलाई पर्यटकीय हवको रपमा विकास गरेर तत्काल मानिसको अर्थोपार्जन हुने योजनाहरु बनाउँछौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ । त्यस्तै हाइड्रोपावरहर ूधेरै छन् । त्यसले पनि यहाँका मानिसहरुलाई सुविधासम्पन्न बनाउन सक्थ्यो तर त्यो हुन सकेको छैन । यसअघि अव्यवस्थित ढंगबाट चलेको छ त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सुधार गर्छौ ।
भन्सारबाट मल आउने तर जिल्लाकाले मल नपाउने अवस्था छ मल दिलाउन के गर्नुहुन्छ ।
जिल्लाका कृषिका हाकिमलगायत सरोकारवालासँग मैेले छलफल गरेको छु । यसअघिका जनप्रतिनिधिलाई पालिकाभर १५० बोरा मल उपलब्ध गराउने सहमति भएको रहेको छ । चुनाव भएको अर्को दिन वैशाख ३१ मा दामाशाहीले ती मल एकलौटीले बाँडेको पाइयो । थोरै भएपनि प्रत्येक वडामा समानुपातिक बाड्ने हाम्रो योजना थियो तर हामी आउनुअघि नै बाडिसकेको पाइयो । मैले कृषिको हाकिमसँग कुरा रगेको छु तर आउने सम्भावना नयून छ । अरु उपायहरुबाट म मल उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछु ।
भन्सार सुचारु गर्न दबाब दिन के गर्नुहुन्छ ?
पालिकास्तरले नभ्याउन सक्छ । यसलाई हामीले कुटनैतिक हिसाबले परारष्टर मन्त्रालयमा यस विषयमा ध्यानाकषर््ण गराउने योजना छ ।
गुणात्मक शिक्षाका लागि के गर्नुहुन्छ ?
पालिकाभरका २९ विद्यालयका प्रधानध्यापक बोलाएर बैठक गरेको छु । गुणस्तरीय शिक्षा नपाएको कुरा सही हो । यसको कारण पनि विद्यालयमा राजनीति घुस्नु हो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति चयन गर्दा नै राजनीति व्यक्ति चयन हुने गर्छन् । त्यस्तै राजीनतिक पहुँच भएका शिक्षक विद्यालयमा नियुक्त हुने र दक्ष शिक्षक बाहिर हुने देखिएको छ । हामीले चाहि नयाँ ऐन बनाएर व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन आठ कक्षा पास हुनुपर्ने नियम बनाउने तयारी गरेका छौँ । शिक्षक राख्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आउनु पर्ने राजनीतिक पहुँचको बाट हैन । हाम्रो मुख्य फोकस नै शिक्षा र स्वास्थ्य मा छ । हामी ६ महिनासम्ममा केही परिवर्तन ल्याउँछौँ ।